बिज्ञान प्रबिधि Archives - Online Palanchok
एजेन्सी– अमेरिकन स्पेस एजेन्सी नासाको इनसाइट नामक स्पेसशिपले मंगलमा ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। मंगल ग्रहमा हुने वायु कम्पनको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि यस स्पेसशिपबाट केहि तथ्य प्राप्त भएको बुझिएको छ।मंगल ग्रहमा हावा चल्दा निक्लिने आवाज अब सुन्न सकिने भएको हो। मंगल ग्रहमा चल्ने हावाको आवाज भएको भिडियो नासाले सार्वजनिक गरेको छ।इनसाइट नामक स्पेसशिपले मंगल ग्रहबाट यस अडियो क्लिप पृथ्वीमा पहिलो पटक पठाएको हो। यो अडियो सुन्नेहरुले मंगल ग्रहको आवाज पहिलो पटक सुन्नेछन्।नासाका अनुसार मंगल ग्रहमा चलिरहेको हावाको रेकर्ड प्राप्त भएको हो। रेकर्ड हुँदा मंगल ग्रहमा चलेको हावाको गति १० देखि १५ माइल प्रति घण्टा रहेको थियो।इनसाइटमा जडान गरिएको दुई सेन्सरले यस अडियो रेकर्ड गरेको नासाले बताएको छ। मंगल ग्रहमा चल्ने हावा सुन्न पाउनु अनियोजित खुशी भएको भन्दै अनुसन्धानकर्ताहरु खुशी व्यक्ति गरिरहेका छन्।इनसाइट ग
एजेन्सी । प्रविधीमा क्रान्ति गरिरहेको चिनले फेरी अर्को चमत्कार गर्ने भएको छ एक । चीनियाँ कम्पनीले विश्वभर निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउँने तयारी गरेको छ । विश्वभर निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउने तयारीमा चिनीयाँ एक इन्टरनेट कम्पनीले उपग्रह लिएर आएको छ । विश्वभर यसको उद्‌घाटन भने आउँदो बर्ष हुने बताइएको छ । उपग्रह चीनको पश्चिमउत्तरमा रहेको गाँन्सु प्रान्तमा जियुकान सेटेलाइट लञ्च सेंटरमा आउँदो बर्ष उद्‌घाटन गरिने भएको लिंकश्योर नेटवर्क कम्पनीले जनाएको छ । मानिसहरुको इन्टरनेटमा पहुँच बढाउँन सेटेलाइटको विकल्प नहुँने भन्दै गुगल, स्पेस एक्स, वेन वेइभ लगायतका कम्पनीले पनि विश्वभर फ्रि वाईफाइका लागि योजना अघि बढाएका छन् । २०२० सम्म अन्तरिक्षमा यस्ता १० उपग्रह र २०२६ सम्म २ सय ७२ उपग्रह हुनेछन् । पिपुल्स डेलीमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार, उपग्रह द्वारा उपलब्ध गराइने इन्टरनेट सेवा सबैले सजिलो तरिकाले
हामी पछिल्लो समय पुरै प्रविधियुक्त साधनमा निर्भर भएका छौ । दिमागलाई कति दुख दिन चाहान्नौँ । यसैले हरेक कुरा मोबाईल वा अरु डिभिाईसमा सेभ गर्ने चाहिएको बेला हेर्ने बानी छ । तर सम्भिने झण्झटबाट मुक्त हुन वा पछि खोजेको बेला सजिलै प्राप्त गर्न गरेको यो कार्यले धेरैलाई पछुतो महसुस गराई सकेको छ । यसैले हामी सचेत गराउँदैछौ । मोबाइल फोनमा आफ्ना संवेदनशील सूचना, तस्वीर, लगायतका चिजहरु सेभ गर्ने गर्नुभएको छ भने सावधान । तपाइँले आफ्नो मोबाइलमा कहिल्यैपनि यी चिजहरु सेभ नगर्नुहोस्ः पर्सनल नम्बरः कहिलेकाहीँ मानिसहरु आफ्नो नागरिकता नम्बर, पासपोर्ट नं. , प्यान नम्बर, बैंक अकाउन्ट नम्बर आदि समेत आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्दछन् । आकस्मिक रुपमा आवश्यक परेमा तत्कालै प्राप्त गर्न सकिने सजिलोका लागि मानिसहरुले यसो गरेका हुन्छन् । तर यस्ता नम्बरहरु गोप्य तथा संवेदनशील हुन्छन् । त्यसैले भुलेर पनि आफ्नो मोबाइलमा स
मोबाइल फोन यति धेरै आवश्यक चिज बनिसकेको छ कि थोरैबेर मात्रै आँखाबाट टाढा भयो भने पनि ठूलै समस्या झेल्नुपर्छ । मोबाइल कतिपय समयमा राखेको ठाउँ भूल्न सकिन्छ भने कतिपय समयमा हराउन पनि सक्छ । यदि तपाईंको मोबाइल फोन हरायो भने त्यो अहिले कहाँ छ भन्ने तुरुन्तै आफैँ पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यतिमात्रै कहाँ हो र तपाईंले त्यसलाई लक गरिदिन र त्यहाँ भएका डाटाहरु मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ । तरिका निकै सजिलो छ । यस्तो सुविधा तपाईंलाई गुगलले दिएको छ । १. सबैभन्दा अघि गुगलको होम पेज खोल्नुहोस् । त्यहाँ जिमेल आईडी लगइन गर्नुहोस्, जुन तपाईंको एण्ड्रोइड डिभाइस प्रयोग भएको मेल आइडी होस् । २. त्यसपछि गुगल सर्च बक्समा गएर ‘Where’s my phone?’ सर्च गर्नुहोस् । जब तपाईंले यस्तो सर्च गर्नुहुन्छ, तत्कालै एउटा लोकेशन म्याप खुल्छ । ३. यस म्यापमा केही सेकेण्डमा नै आफ्नो मोबाइलको अहिलेको लोकेशन देख्न सक्नुहुन्छ ।
कुनै बेला भूलबस कुनै व्यक्तिलाई पठाउन खोजेको सन्देश अर्कैको इनबक्समा सेन्ड हुन्छ । यो समस्याबाट फेसबुकका प्रयोगकर्ताहरु निकै ठूलो समस्यामा थिए । तर अब फेसबुकले ल्याएको नयाँ सुविधाले यो समस्याको हल गरेको छ । यसअघि प्राप्त मेसेज डिलिट गर्न सकिएपनि पठाइ सकेको मेसेज आफ्नो इनबक्समा मात्रै डिलिट हुने गर्दथ्यो । अब भने अरुकोमा डेलिभरी भएको सन्देश पनि मेटन सकिने भएको छ । यसबाट फेसबुकमार्फत हुने अपराधमा समेत कमी हुने विश्वास लिइएको छ । कतिपय अवस्थामा पुराना मेसेज देखाएर महिला या पुरुषलाई ब्ल्याकमेल गर्ने समस्याबाट पनि यसले मुक्ति दिने छ । अब आफूले कुनै अरुलाई पठाएको मेसेज उसको इनबक्सबाट समेत मेटन सकिने छ । फेसबुकले पठाइएको मेसेज डिलिट गर्नका लागि १० मिनेटको समयसीमा तय गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने यदि युजरले कसैलाई भूलवस सन्देश पठाएको छ भने यो सन्देश डिलिट गर्नका लागि तपाईलाई दश मिनेटको समय द
यो समयमा बच्चा बच्ची देखी लिएर बुडा बुडी सबैको हातमा मोबाईल हुने गर्दछ ।मोबाईल ब्याट्री बाट चल्ने यन्त्र भएकोले यसलाई बेला बेला चार्ज गर्न आवश्यक पर्दछ तर हामी सँग कुनै समय चार्जर नहुन सक्छ र मोबाईल चार्ज गर्नु पर्ने अवस्था आउछ ।।यहाँ यस भिडियोमा कसरी बिना चार्जर आफ्नो मोबाईल चार्ज गर्ने तरिका देखाइएको छ । मुला खानको फाइदा नेपाली भान्सामा प्रायः नटुट्ने मुला पाइल्स रोग निको पार्ने उत्तम औषधि हो । मुला नियममित खानाले पाइल्स रोग एक महिनामै निको हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । मुलाको नियमित र सही प्रयोगबाट पाइल्ससम्बन्धी समस्या एक महिनामै समाधान हुन्छ भने पाइल्स लाग्नबाट नै बच्न समेत सकिन्छ । पाइल्स एउटा यस्तो रोग हो, जसमा शरीरका विशेष हिस्सामा हरेक समय पीडा र जलन महशुस हुने गर्दछ । चिकित्सकहरुले पनि पाइल्सका रोगीहरुलाई खान सल्लाह दिने गर्दछन् । आखिर मुला नै पाइल्सको अचुक औषधी हुन
लुकाएर राखिएको वाइफाईको पासवर्ड, यसरी सजिलै सँग ह्याक गर्ने तरिका सिक्नुहोस‘ एजेन्सी । अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन । यस्तोमा कुनै पब्लिक (सार्वजनिक) वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त मज्जा नै हुने भयो । प्राय कलेज, सपिङ सेन्टर, सिनेमा हल, तथा होटेलहरुमा वाईफाई खुला रहन्छ । अर्थात् यदि यस्ता ठाउँमा जडित वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त तपाईको काम झन सजिलो हुने नै भयो ।सार्वजनिक वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन के गर्ने त रु यो आलेखमा हामीले केही यस्ता मोवाइल एपबारे उल्लेख गरेका छौं, जसको प्रयोगबाट तपाईलाई सार्वजनिक वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन मद्दत पुग्ने छ । बेस्ट वाई–फाई नेटवर्क ह्याकर .. यो एप बनाउने कम्पनीको दावी छ कि वाईफाईमा राखिएको जस्तोसुकै पास
संसारको पहिलो फोल्डेबल स्मार्टफोन सार्वजनिक, ७.८ इन्चको ट्याबलेटलाई बनाउन सकिन्छ चार इन्चको
अमेरिकी कम्पनी रोयलले संसारको पहिलो फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन बिहिबार चीनमा सार्वजनिक गरेको छ । यो स्मार्टफोनको नाम फ्लेक्सपाई राखिएको छ । प्राविधिक रुपमा यो फोन एक ट्याबलेट जस्तै छ किनभने यसमा ७.८ इन्चको स्क्रिन दिइएको छ । तर यसलाई मोडेर चार इन्च बनाउन सकिन्छ । सामसङ, ह्वावेले गर्न नसकेको नयाँले गरेर देखायोः संसारको सबैभन्दा ठूलो स्मार्टफोन कम्पनी सामसङ र दोस्रो ठूलो ह्वावेमध्ये एकले यसवर्ष संसारको पहिलो फोल्ड गर्न मिल्ने स्मार्टफोन पेश गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर ६ वर्ष पुरानो अमेरिकी स्टार्टअप कम्पनी रोयले यस्तो गरेर देखायो । पहिलो फोन जसमा 7nm स्न्यापड्रेगन ८१५० प्रोसेसरको प्रयोगः फ्लेक्सपाई संसारको पहिलो फोल्डेबल स्मार्टफोन हुनुका साथै 7nm स्न्यापड्रेगन ८१५० प्रोसेसर प्रयोग गरिएको पहिलो फोन हो । यसका साथै कम्पनीले आरओ–चार्जिङ प्रविधीको प्रयोग गरिएको छ र कम्पनीको दा
स्मार्ट कण्डमले त्यो बताउँछ, जुन तपाइँलाई पनि थाहा छैन….
स्मार्ट घडी र गुगल ग्लासपछि विश्वमा वियरेबल टेक्नोलोजीप्रति आकर्षण बढेको छ। घडी र चश्मापछि अब बजारमा नयाँ नयाँ उत्पादन आएका छन्। यतिबेला बजारमा स्मार्ट कण्डम आएको छ। यसको बिक्रीकालागि रजिष्ट्रेशन सुरु भइसकेको छ। स्मार्ट कण्डम बनाउने कम्पनीले कण्डमले प्रत्येक प्रश्नको र नसोचेको कुराको पनि जवाफ दिने दाबी गरेको छ। बेलायतको एक अनलायन स्टोरले यो कण्डमको बिक्री प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कम्पनीले यसअघि २०१६ मा नै कण्डम बजारमा ल्याउने बताएको थियो। स्मार्ट कण्डम प्रयोगले यौन सम्पर्क कतिसमयसम्म, कति पटकसम्म गर्ने सम्म जानकारी पाउन सक्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ। यसको नाम कण्डम भएपनि यो परिवार नियोजनको साधन भने नभएको कम्पनीले जनाएको छ। एकपटक प्रयोग गरेको स्मार्ट कण्डम बारम्बार प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि ब्लुटुथबाट जोडेर मोबाइल एपमार्फत कण्डमको आँडल डा
तपाइको फेसबुक पेज र वेबसाइट कमाउन मिल्ने छ कि नाई यसरी चेक गर्नुहोस [भिडियो हेर्नुहोस ]
तपाइको फेसबुक पेज र वेबसाइट कमाउन मिल्ने छ कि नाई यसरी चेक गर्नुहोस । के तपाई फेसबुक चलाउनुहुन्छ रु पक्कैपनि जेजतिले ईन्टरनेट चलाउनुहुन्छ, उहाँहरुले कम्तिमा फेसबुक एकाउन्ट त पक्कै बनाउनुभएको छ होला । तर के तपाईले आफ्नो त्यहि फेसबुक अकाउन्टबाट पैसा कमाउन सक्छु भन्नेबारेमा कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? भिडियो हेर्नुहोस यो पनि पढौ गर्भवती हुँदा श्रीमानले गराए १० जनाबाट सामूहिक बलात्कार, श्रीमतीले सुनाइन् दर्दनाक कथा आफू गर्भवती भएका बेला आफ्नै श्रीमानले १० जना युवाकबाट सामूहिक बलात्कार गराइ चरम यातना दिएकी एक महिला अहिले दोषीलाई कारवाही गराउनको लागि संघर्ष गरिरहेकी छिन् । ती महिलालाई आफ्ना श्रीमानले ३ पटक ‘तलाक’ भनेर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने नियमको पक्षमा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेका थिए । तर, ती महिलाले यसको विरोध गरेपछि उनले आफ्नै अगाडि १० जना केटाहरु बोलाएर आफ्नी गर्भवती श्रीमतीलाई